UTEQUILA UDON JULIO WAZISA NGERARE YELTTIMA RESERVA INKCAZO - UKUTYA NEZISELO
UTequila UDon Julio wazisa ngeRare yeLttima Reserva Inkcazo
UDon Julio Tequila ubhengeze ukwaziswa kwe Tequila Don Julio Ultima Reserva, iinyanga ezingama-36 ezikhethekileyo ze-Luxury Extra-Añejo egcina ilifa likaDon Julio González lokugqibela-isivuno se-agave sokugqibela esityalwe nguGonzález kunye nosapho kwi2006.
Njengomrhumo kuDon Julio González wokuzinikela kunye nobugcisa, esi sivuno sokugqibela se-agave sabekelwa bucala kulolulophu lukhethekileyo. Ubuninzi obulinganiselweyo bolwelo olunqabileyo olunqabileyo luya kuqhubeka lukhutshwa nyaka ngamnye de lufikelele esiphelweni sesivuno sokugqibela seagave.
Xa uDon Julio González eqala uhambo lwakhe lokwenza i-tequila, wenza indawo ekhethekileyo yabucala eyayenzelwe ukuba yabelwane nosapho kunye nabahlobo bakhe, utshilo uChristina Choi, uSekela Mongameli oLawulayo waseTequila, eDiageo emNtla Melika.
Siyazingca ngokuqhubeka nelifa lakhe ngokukhululwa kukaTequila Don Julio Ultima Reserva, umnikelo ohlonipha iminyaka engama-80 yokuzinikela kunye nolwelo olwalenzelwe ukonwabela kanye njengoko uDon Julio wayezimisele-ukubhiyozela abo basondeleyo kuwe.
UTequila Don Julio Ultima Reserva uphumle kwimigqomo ye-oki eyayikade isetyenziselwa ukuguga i-bourbon kwaye igqitywe kwiibhasikithi zewayini zeMiraira ezinamava ngendlela yeSolera.
Isiphumo somoya oqaqambe kakuhle ngegolide ngombala oqala ngempumlo ye-oki egcotyiweyo kunye ne-caramel, kulandela iingcebiso ze-apricot kunye neorenji, kwaye ugqibe nge-agave enobusi egudileyo emnandi eyonwabele kakuhle.
Ifumaneka ngobuninzi obulinganiselweyo, ibhetshi yokuqala yeTequila Don Julio Ultima Reserva iya kufumaneka kwiimarike ezikhethiweyo ngelixa izinto zihlala zikhona, ngexabiso eliphakanyisiweyo lokuthengisa le- $ 399 USD kunye nebhetshi ekhutshiweyo yonyaka ngamnye ebhalwe ngokukodwa.
Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela UDon Julio iwebhusayithi esemthethweni .
Bona ngakumbi malunga - I-Tequila ezili-10 eziThotyayo zokuzama ngo-2021
izimvo ezilungileyo zokuqala zetattoo kubafana
Iitoto zeoyile ze & & d
spider web tattoo esandleni
iiplanga zomthi ngaphezulu kwamachibi omhlaba